DF oo u jawaabtey Kenya: Kiiska badda daciif ma ahan, ICJ baana xukmineysa
Kenya oo loo jawaabey: Kiiska badda daciif ma ahan, ICJ baana xukmineysa
Xukuumada Nairobi ayaa kiiska badda ku tilmaamtay mid daciif ah balse Muqdisho ayaa ka fal-celisay maalmo kadib.
NAIROBI, Kenya – Xili Kenya ay karaar-siisay talaabooyinkeeda ay ku dooneyso in dacwadda badda lagu xaliyo wada hadal ayaa haddana Soomaaliya waxay joogteysay jawaabaha aan hadalka dhaafsiisaneen.
Todobaadkii hore, Monica Juma, wasiirka arrimaha dibadda Kenya ayaa gal-dacwadeedka kala dhaxeeya Soomaaliya ku tilmaamtay "mid daciif ah" kadib markii la waydiiyey in uu yahay mid "xoog badan".
"Waxaa jirta sheeko la isugu sheekeeyay oo ah in Soomaaliya ay haysato dacwad xoog badan. Balse annaga waxaan haysanaa kiis dhan kasta ka xoogan balse ma doonaya in aan ka hor-dhaco go’aanka maxkamada," ayay tiri.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan hadalkaasi uga hadlay. Qaar baa ku tilmaamay "is-daafacid" halka kuwa ay ku sheegen "yasitaan".
Hasa ahaatee wasiirka Xiriirka Caalamka ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, ayaa waxa uu "ku qoslay" markii la waydiiyey hadalka kasoo yeeray dhigiisa wadanka ay ciidamadiisu kamid yihiin howlgalka AMISOM.
"Malaha iyadday la tahay," ayuu ku bilaabay. "Hadii uu xoogan yahay ama uu daciif ah yahay, maxkamadda ayaa go’aan ka gaari doonta," ayuu hadalkiisa kusii daray diblumaasiga ugu sareeya Soomaaliya.
Hadaladan ayaa waxay hawada isu mariyeen labada wasiir wareysi gaar ah oo ay siiyeen muuqaal-baahiyaha BBC-da oo ah warbaahinta hoostagta dowladda Ingiriiska oo labada dal soo gumeysatay.
Waraf isu lulashada labada dowladood ee deriska ah oo salka ku haysa goob badkeeda lagu sheegay 100 kilometer oo hodan ku ah kheyraad badan ayaa waxaa go’aan ka gaareysa Maxkamada Cadaaladda Aduunka.
Iyadda oo heer gabagabo ah ay mareyso dacwadda, mid kamid ah dhageysiga ugu dambeeya waxaa loo muddeeyay bisha September ee sanadkan 2019, halkaasi oo labada dowladood ay doodooda kusoo bandhigi doonan.
Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa kalsooni weyn ka muujiyey "in ay afka ciida u dari doonan" Kenya.
DFS: Kenya waxay qarka u saaran tahay in ay ka baxdo dacwada badda
Soomaliya 05.09.2019. 13:22
Ku xigeenka madaxa NISA oo kamida xubno ay Kenya xayiraad kusoo rogtay
Afrika 04.06.2019. 18:00
Jubaland oo digniin la xiriirta talaabooyinka xukuumada u dirtay Farmaajo 04.08.2020. 11:30